June 15, 2021 - Channel Lover
အလိုမရှိသီချင်းကို ကြက်သီးထစရာကောင်းလောက်အောင် အားမာန်အပြည့်နဲ့ ဟစ်ကြွေးသီဆိုခဲ့ကြတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေက ညီအစ်ကိုတွေရဲ့ဗီဒီယို
June 15, 2021 by Channel Lover
ပြည်သူတွေကတော့ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဇွဲ၊လုံ့လ၊ဝီရိယတွေကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး အာဏာရှင်စနစ်ကို ရရာနည်းလမ်းနဲ့ တော်လှန်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်နက်ကိုင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေရှိသလို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ တတ်နိုင်သလောက် ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိ နေပြန်တာ ဖြစ်ပါတယ် လူငယ်တွေကတော့ နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေ ကောင်းစားဖို့နဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး အေးချမ်းဖို့အတွက် အရှေ့ထွက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် လူငယ်တွေက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေထဲကို ဝင်ရောက်နေကြသလို တစ်ချို့ကလည်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆီမှာ ခိုလှုံနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တောင်ထဲတောင်ထဲမှာ စစ်ပညာသင်ယူနေတဲ့ လူငယ်တွေက ရောက်ရာအရပ်ကနေ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေဆဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ အခုလည်း KNU လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေက “အလိုမရှိ” … Read more
မိုးကြီး ရေလျှံ သတိပေးချက် မြေနိမ့်ရာနေရာနေထိုင်သူတွေနဲ့ မြေပြိုနိုင်သောနေရာတွေနေထိုင်သူတွေ သတိထားကြပါ
မိုးကြီး ရေလျှံ သတိပေးချက် မြေနိမ့်ရာနေရာနေထိုင်သူတွေနဲ့ မြေပြိုနိုင်သောနေရာတွေနေထိုင်သူတွေ သတိထားကြပါ Flooding warning! ၂၀၂၁ ဇွန်လ ၁၅ရက်နေ့ညမှ ၁ရရက် နေ့အတွင်း ကျိုက်ထို ဘီးလင်း သထုံ ဘားအံ ပေါင် မုတ္တမ မော်လမြိုင်ကျုံဒိုး ကော့ကရိတ် မြဝတီ မိုးကြီးရေလျှံဖြစ်နိုင်ပါသဖြင့် မြေနိမ့်ရာနေရာနေထိုင်သူတွေနဲ့ မြေပြိုနိုင်သောနေရာနေထိုင်သူများအထူးသတိထားကြပါနော်…. su su san (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅)ရက်နေ့ ညနေ(၄:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ ခြေ အ နေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းရာမှ အားအလွန်ကောင်းနေပါသည်။ မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတွင် နေရာကွက်ကျား၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ နေပြည်တော်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် … Read more
ယနေ့ မိုးကြီးနိုင်သောမြို့များ တိုက်ကြီး ဥက္ကံ သုံးဆယ် သာယာဝတီ လက်ပံတန်း အုတ်ဖို မင်းလှ ကြို့ပင်ကောက် ဇီးကုန်း ပဲခူး ဘုရားကြီး ပျဉ်ပုံကြီး ကျိုက်စကော ဘုရားလေး ညောင်လေးပင် ပြွန်တံဆာ ပိန်းဇလုတ် ကျောက်တံခါး မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောအ‌ခြေအနေ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အား ကောင်းရာမှ အားအလွန်ကောင်းနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတွင် နေရာကွက်ကျား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ဒေသအလိုက်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ … Read more